Ny mety sy ny aingam-panahy hampiasa borosy amin'ny Illustrator | Famoronana an-tserasera
Ny fahaiza-manao borosy ao amin'ny Illustrator
Rodrigo Santiago | | sary, maro
Ny fahafahan'ny borosy ao amin'ny Illustrator dia tsy misy farany. Afaka manao sary mahagaga mahagaga amin'ny alàlan'ity fitaovana ity isika. Ny fampiasana manokana dia ny fahaizana nomen'i Illustrator antsika hamoronana borosintsika manokana avy amin'ireo fananganana vector ananantsika.
Hanangana borosy tena izy izahay ho an'ny sary vongana amin'ny alàlan'ny ellipse. Noho izany, ny hany ataontsika dia ny mamorona ellipse amin'ny habe kely ary avy eo manova azy ho borosy kanto vaovao Fitaovana Ellipse (L).
Vantany vao noforonina, ary voafantina, dia tsy maintsy mandeha any amin'ny faritra borosy isika ary mifidy Borosy vaovao eo amin'ilay kisary miendrika folio misy zoro mivalona eo amin'ny sisiny ambany ankavanan'ny boaty Brushes.
Manaraka izany dia mila mifidy ilay borosy zavakanto isika raha izay tiantsika, toy ny eto amintsika, dia ny manao sary miaraka aminy.
Ao amin'ny varavarankely manaraka, azontsika atao ny manamboatra ny borosy. Handao ny sakany voafetra sy ny safidy isika Ahinjiro mba hifanaraka amin'ny halavan'ny kapoka voafantina.
Raha vantany vao noforonina ilay borosy, dia azontsika atao, ohatra, ny mampiasa azy mba hameno ny silhouette an'ny biby, toa ilay iray amin'ity sary manaraka ity, ka hanome azy ny halaliny.
Mamorona kapoka amin'ny borosintsika toy ny hoe volon'ny biby izy ireo, tsirairay avy no ahafahantsika mamorona fifanoherana mainty voalohany amin'ny lokon'ny mena amin'ny silhouette. Azontsika atao ny miovaova ny haben'ny borosy mba ho tsara kokoa na tsia ny kapoka noforonina.
Manaraka izany, afaka manao toy izany koa isika fa amin'ny borosy mena mena kokoa noho ny an'ny silhouette ka miteraka halaliny ny fahasamihafana.
Ary farany, tsy maintsy omentsika ny mason'ny orange kely fotsiny ny masontsika mba ho velona kokoa izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ny fahaiza-manao borosy ao amin'ny Illustrator
sheyla dia hoy izy:
Heveriko fa tsara ny manome torolàlana momba ny fifandraisana amin'ny programa
Valio i sheyla
Andro tsara ??
Miezaka mamerina ny vokatra nataonao tamin'io sary io aho fa tsy hitako ny lalana?
Manana sary mitovy amin'ilay namako manana tongotra 4 aho. Azonao omena ahy ve ny torohevitra sasany hampiasana azy? Misy torolàlana ve?
Efa manana ny sary vector aho, izay ihany. Sarotra amiko ilay zavatra borosy.
Tena tiako ve izany?